Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » 60% nke ndị America enweghị ike ịga njem n'oge ezumike
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
.60% nke ndị America agaghị eme njem n'oge ezumike.
Nnyocha ahụ chọpụtara na 29% nke ndị America nwere ike ịga njem maka Ekele na 33% nwere ike ịga njem maka ekeresimesi - mmụba site na 21% na 24%, n'otu n'otu, ma e jiri ya tụnyere 2020. Ndị na-eme atụmatụ ịgafe ezumike na-atụ anya na ha ga-eme njem. ịnya ụgbọ ala, mana ọnụ ahịa gas na-arị elu nwere ike imebi atụmatụ ndị ahụ.
Naanị otu onye n'ime ndị America atọ na-ezube ịga njem maka ekeresimesi, yana atụmatụ ole na ole iji mee njem maka Ekele.
68% nke ndị njem Ekele na-eme atụmatụ ịnọnyere ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi, ebe 22% na-eme atụmatụ ịnọ na họtel.
66% nke ndị njem ekeresimesi na-eme atụmatụ ịnọnyere ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi, ebe 23% na-eme atụmatụ ịnọ na họtel.
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-arị elu megide COVID-19 abawanyela ọkwa nkasi obi nke ndị njem, ọtụtụ ndị America ka na-ahọrọ ịnọ n'ụlọ n'oge ezumike a, dịka nyocha mba ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nyere ikike. Hotellọ oriri na ọ Hotelụ Americanụ American & Lodging Association (AHLA).
Nnyocha ahụ chọpụtara na 29% nke ndị America nwere ike ime ya njem maka Ekele na 33% nwere ike ịga njem maka ekeresimesi - mmụba sitere na 21% na 24%, n'otu n'otu, atụnyere 2020. Ndị na-eme atụmatụ ịgafe ezumike na-atụ anya ịnya ụgbọ ala, mana ọnụ ahịa gas na-arị elu nwere ike imebi atụmatụ ndị ahụ.
Emere nyocha nke ndị okenye 2,200 Ọktoba 30 - Nọvemba 1, 2021, nke Morning Consult na nnọchite anya. AHLA. Isi ihe nchoputa gụnyere ihe ndị a:
Naanị otu n'ime ndị America atọ na-ezube ịga njem maka ekeresimesi (33% nwere ike ịga njem, 59% eleghi anya), yana atụmatụ ole na ole iji mee njem maka Ekele (29% eleghị anya, 61% eleghi anya).
52% nke ndị America na-ekwu na ha na-eme atụmatụ ime njem ole na ole yana 53% na-eme atụmatụ ime njem dị mkpụmkpụ n'ihi ịrị elu ọnụ ahịa gas.
Ndị njem ntụrụndụ na-eme mgbanwe dị iche iche na atụmatụ njem ha dabere na ọnọdụ ọrịa a na-efe efe ugbu a, gụnyere naanị ime njem dị anya (58%), na-eme njem ole na ole (48%), na ime njem dị mkpụmkpụ (46%).
N'ime ndị nne na nna nwere ụmụaka na-erubeghị afọ 12, 41% na-ekwu na ịnweta ọgwụ mgbochi maka ụmụaka dị afọ 5-11 ga-eme ka ha nwee ike ịga njem.
68% nke ndị njem Ekele na 64% nke ndị njem ekeresimesi na-eme atụmatụ ịnya ụgbọ ala, ma e jiri ya tụnyere 11% na 14%, n'otu n'otu, ndị na-eme atụmatụ ife efe.
Ọ bụ ezie na ọgwụ mgbochi enyerela ndị njem aka inwe ahụ iru ala, ịrị elu ọnụ ahịa gas na nchegbu na-aga n'ihu banyere ọrịa a na-eme ka ọtụtụ ndị America na-ala azụ ịga njem n'oge ezumike. N'agbanyeghị ntakịrị mmụba a na-atụ anya na njem ezumike n'afọ a, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-aga n'ihu na-enwe nsogbu akụ na ụba site na ọrịa ọjọọ ahụ, na-egosi mkpa ọ dị maka enyemaka gọọmentị ezubere iche, dị ka Save Hotel Jobs Act, iji kwado ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ya ruo mgbe njem ga-alọghachi zuru oke.
N'agbanyeghị na ọ bụ otu n'ime ihe kacha sie ike, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ bụ naanị akụkụ nke ile ọbịa na ụlọ ọrụ ntụrụndụ enwetabeghị enyemaka ọrịa ozugbo site na Congress.